Jamaica iyo Sacuudi Carabiya si ay u saxiixaan dukumiinti ujeedkoodu yahay kor u qaadista isku xirnaanta hawada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jabinta Wararka Jamaica » Jamaica iyo Sacuudi Carabiya si ay u saxiixaan dukumiinti ujeedkoodu yahay kor u qaadista isku xirnaanta hawada
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Jamaica • Jebinta Wararka Sucuudiga • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Ka dib kulan guul ku dhammaaday oo laba geesood ah, Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, (bidix) wuxuu u fidiyay Wasiirka Dalxiiska Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mudane Axmed Al Khateeb booqasho uu ku tagayo Xarunta Adkaysiga Dalxiiska Caalamiga ee fadhigeedu yahay Kingston iyo Xarunta Maaraynta Dhibaatooyinka. Intii kulanku socday, Jamaica iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay ku heshiiyeen inay kala saxiixdaan dukumiinti ujeedo ah, si kor loogu qaado isku xirnaanta hawada ee Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett ayaa ku dhawaaqay in Jamaica iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ku heshiiyeen inay kala saxiixdaan dukumiinti ujeedkooda ah, si gacan looga geysto kor u qaadista isku xirnaanta hawada ee Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka.
Shirar isdaba joog ah ayaa ka soconayay agagaarka Gudiga UNWTO ee Arimaha Ameerika ee lagu qabtay Jamaica.
Wasiirka Bartlett ayaa sheegay in qorshaynta meelo badan loo maro ay muhiim u tahay horumarka dalxiiska gobolka maadaama ay tahay qaacido cusub oo ka jirta aaggan si loo wado isku xirnaanta aduunka oo dhan.
Wadahadalka ku saabsan qaabkan ayaa la filayaa inuu sii socdo maalmaha soo socda.
Wasiirka ayaa ku dhawaaqay warkan ka dib shirar is daba joog ah oo uu la yeeshay Mudane Ahmed Al Khateeb, Wasiirka Dalxiiska Boqortooyada Sacuudi Carabiya, oo hadda ku sugan Jamaica kulanka 66aad ee Guddiga UNWTO ee Qaarada Ameerika. Shirka waxaa sidoo kale ka mid ahaa Wasiiro Dalxiis oo dhowr ah oo heer gobol ah kuwaas oo si wada jir ah ugu soo biiray doodaha.
“Waxaan ka wada hadalnay isku xirnaanta hawada iyo sida la isugu xirayo Bariga Dhexe, Suuqa Aasiya, iyo meelaha ku teedsan dhinacaas adduunka si ay noogu soo biiraan shirkadaha diyaaradaha waaweyn ee meelahaas ku sugan. Gaar ahaan diyaaradaha Etihad, Emirates iyo Saudi airlines, ”ayuu yiri Bartlett.
"Heshiiska aan ka soo baxnay kaas oo ah in Wasiirka Al Khateeb uu miiska soo saari doono, wada-hawlgalayaashaas waaweyn, halka aniga aan mas'uul ka noqon doono isku dubaridka dalalka nagala shaqeeya iskaashiga qaab-dhismeedka dalxiiska ee dhowr dal, si aan awood ugu siino nidaam Hub iyo Af-hayeen ah si ay gaadiidku uga soo guuraan Bariga Dhexe una yimaadaan aaggeenna oo ay u helaan qayb ka mid waddan ilaa dal kale, ”ayuu raaciyay.
Waxa kale oo uu sharaxaad ka bixiyay in qorshayaasha loogu talagalay meelo badan ay muhiim u tahay horumarka dalxiiska ee gobolka maadaama ay tahay “qaacido cusub oo ku dhex jirta aaggan si loo wado isku xirnaanta adduunka oo dhan, laakiin in ka sii badan si loo ballaariyo suuqa si loo abuuro culeys muhiim ah waxay u baahdeen inay soo jiitaan shirkado diyaaradeed oo waaweyn iyo shirkadaha waaweyn ee dalxiiska si ay noo xiiseeyaan oo ay u yeeshaan dhaqdhaqaaq dalxiis oo xoog leh deegaankeenna dhexdiisa. ”
Bartlett wuxuu xusay in qorshahan uu waxbadan ka badali doono Kariibiyaanka maadaama ay u oggolaan doonto suuqyada cusub inay xiriir toos ah la yeeshaan gobolka, sidaas darteedna ay u kordhayaan dakhliga soo gala, gaar ahaan shirkadaha dalxiiska yaryar iyo kuwa dhexe.
“Anaga ahaan kani waa wax badala ciyaarta marka la sameynayo, sababtoo ah wadamada yar yar ayaa jecel Jamaica waligood ma yeelan doonaan awood ay ku yeeshaan diyaarado waaweyn sida Qatar iyo Emirates oo nooga imanaya duulimaadyo toos ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka faa'iideysan karnaa duulimaadyadan imanaya booska Kariibiyaanka - iyagoo halkan ka degaya Jamaica laakiin u qaybinaya dalal kale oo Kareebiyaanka ah, ”ayuu sharraxay.
Wadahadalka ku saabsan qaabkan ayaa la filayaa inuu sii socdo maalmaha soo socda, iyadoo rajada heshiis is afgarad la dhameystirayo.
Wasiirka Al Khateeb, wuxuu muujiyey mahadnaq lagu martiqaaday Jamaica si ay uga qayb gasho doodo gacan ka geysan doona xoojinta isku xirnaanta Bariga Dhexe iyo Caribbean.
“Waxaan ka wada hadalnay asxaabteyda, mowduucyo aad u xasaasi ah waxaana taageereynaa abuurista buundooyin u dhexeeya Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka. Waxaan uga mahadcelinayaa Wasiir Bartlett fursaddan oo aan rajeynayaa inaan ballaariyo shirkadda ballaarinta Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka, ”ayuu yiri Al Khateeb.
Intii kulanku socday, waxay sidoo kale ka wada hadleen dhinacyada kale ee iskaashiga suurtagalka ah ka mid yahay, oo ay ka mid yihiin horumarinta raasamaalka aadanaha, dalxiiska bulshada iyo dhisidda adkeysiga ka jira gobolka.
Mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa horumarinta adkeysiga iyo maaraynta dhibaatooyinka, iyo sidoo kale joogtaynta tiirarka muhiimka ah ee ay tahay in la saadaaliyo soo kabashada dalxiiska. Laakiin intaas in ka sii badan, muhiimada ay leedahay in la dhiso awood dhexdeeda wadamada leh dalxiiska oo ah wadaha dhaqaalahooda - waa wadamada sida daciifnimada ah loo helo isla markaana u nugul khalkhalka. Waxaan arki doonnaa wada shaqeyn ka socota dhismaha ka baxsan xarunta adkeysiga ee halkan Jamaica iyo xarunta adkeysiga ee ku taal Sacuudi Carabiya, ”ayey tiri Bartlett.
Wasiirka Al Khateeb wuxuu la wadaagay dareen la mid ah muhiimada ay leedahay dhisida adkeysiga iyo joogtaynta, mustaqbalka warshadaha.
“Dhamaanteen waan ognahay in dalxiisku u taagan yahay 10% wax soo saarka guud ee adduunka ka hor dhibaatada iyo 10% shaqooyinka adduunka. Nasiib darrose, wershaddii waxaa si ba'an ugu dhuftey aafada, wax badana waan luminey 2020ka oo hadda tallaalka iyo furitaanka wadamo badan oo xuduudaha ah, waxaan bilownay dooda ku saabsan sida adduunku u ekaan doono mustaqbalka waxaanan bilowney qorshaynta booska- COVID iyo wax ka barashada caqabadaha, ”ayuu yiri.
“Marka, joogtayntu waa mowduuc aad muhiim u ah. Waxaan dooneynaa inaan abuurno adkeysi badan mustaqbalka iyo wershedeyn waarta - mid ixtiraamta deegaanka iyo dhaqanka, ”ayuu raaciyay Al Khateeb.